မင်းဝေဟင်: October 2012
ဒီရွာကလေးမှာ ဟိုး . .ရှေးရှေးကတည်းက အရိုးစွဲနေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတစ်ရပ်ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ လူတစ်ယောက်၊ ဒါမှမဟုတ်မိသားတစ်စုဟာ အလှူတစ်ခုပြုပြီးတိုင်းမှတ်တမ်းတင်အနေနဲ့ ကမ္ပည်း လေးတွေထိုးထားကြခြင်းပဲ။ ကမ္ပည်းထိုးပြီးလှူရတဲ့ အလှူမှလည်း စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ ကျောင်း၊ ကန်ဘုရားတန် ဆောင်းစတာတွေကို လှူပြီးထိုးတဲ့ ကမ္ပည်းဆိုတာတွေအသာထား။ တစ်လံလောက်ရှိတဲ့ လမ်းတံတားလေးပြုပြင် ရင်လည်း ကမ္ပည်းလေးတော့ ထိုးထားလိုက်တာပဲ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ မီးချောင်းလေးတစ်ချောင်းဖြစ်စေ၊ သောက်ရေအိုးလေးတစ်အိုးဖြစ်စေ။ လှူလိုက်ရင်လည်း ဦးဘယ်သူ+ဒေါ်ဘယ်သူကောင်းမှုဆိုတာပါပြီးသား။
နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားကျောင်းဆောင်လေးတွေကြည့်ဦးမလား။ ဘုရားကျောင်းဆောင်က တစ်တောင် လောက်။ အဲ . .ကမ္ပည်းစာတမ်းကလည်း တစ်တောင်လောက်။ ဘုရားရဲ့ဘွဲ့တော်နဲ့အလှူရှင် ကမ္ပည်းဆိုတာရောလို့။ အဲလို ကမ္ပည်းလေးတွေထိုးပြီးတိုင်းလည်း စကားတိုက်ဆိုင်ရင် အမှတ်တရအနေနဲ့ပြောနေတတ်ခဲ့သေးတာ။ လှူထားတယ်ဆိုတဲ့ စကားတောင်မဟပဲ၊ ကမ္ပည်းထိုးထားတာလေးတွေကိုပဲ တခုတ်တရပြောနေကြတာ။
'ကိုခွေးရိုးတို့များတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲဆိုတာများ ကမ္ပည်းတွေဆိုပြည့်လို့။ မုဒ်ဦးဝက သံပန်းတံခါး တွေကြည့်မလား။ ကုဋီသွားတဲ့ နတ်လမ်းတွေမှာကြည့်မလား။ စုံလို့။ သာဓုများတော့ အကြိမ်တစ်ရာ လောက်ခေါ်ချင်စရာ'
ပြောရရင်ပုဂံပြည်ကြီးထွန်းလင်းတောက်ပချိန်က မုဆိုးမများပါမကျန် ဘုရားလေးတစ်ဆူတော့ တည်နိုင် ကြတယ်လို့ ဆိုစမှတ်ရှိသလို၊ ဒီရွာလေးမှာလည်း ဘယ်လောက်ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေပါစေ။ သာသနာပိုင် အဆောက် အဦးတစ်ခုခုမှာတော့ အလှူလေးလှူပြီး ကမ္ပည်းလေးတော့ ထိုးပြီးသားပဲ။ ယုတ်စွအဆုံး ကုဋီတံခါးလေးပျက်လို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတာတောင်။
'ကုဋီတံခါးပြန်လည်မွမ်းမံ အလှူရှင်၊ ဒကာမကြီးဒေါ်တုတ်' ဆိုတာမျိုး။ အလှူတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင် တော့ ကမ္ပည်းလေးမှမထိုးလိုက်ရရင် မပြည့်စုံ၊ မပြီးမြောက်သလိုမျိုး။ အပြိုင်အဆိုင်လို့ပဲပြောပြော၊ စွဲမြဲနေတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုလို့ပဲဆိုဆို နောက်ဆုံးမှာတော့ ရွာကလေးနဲ့ သဟဇာတမလိုက်အောင် ကမ္ပည်းမှတ်တမ်းတွေနဲ့ ပြည့်လျှံနေတာ။ 'ကမ္ပည်းတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရွာ' လို့တောင် ပြောလို့ရသွားတာ။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်ထိ အလှူမှတ်တမ်းတင် ကမ္ပည်းအက္ခရာမရှိခဲ့တာဆိုလို့ တစ်ယောက်တော့ရှိနေသေးတယ်။
ဒီရွာလေးရဲ့ နာမည်က အေးရွာတဲ့။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ ခရမ်းမြို့နယ်ထဲမှာမို့ စည်ပင်သာယာဝပြောတဲ့ ရွာကြီးလားဆိုတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ရွာထဲမှာ အိမ်ခြေဆိုတာစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ရေတွက်မှ သုံးဆယ်လောက်။ ရွာရိုးကိုးပေါက်တစ်ခေါက်လောက် လျှောက်ကြည့်။ တွေ့တဲ့သူအရေအတွက် လက်ဆယ်ချောင်းထက်မပိုဘူး။ ဒါတောင်ရွာက တောင်ရွာ၊ မြောက်ရွာဆို ပြီး နှစ်ခြမ်းကွဲနေလိုက်သေးတာ။
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကျတော့လည်း နွေရာသီမှာတောင် လိုင်းကားမရောက်။ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်းသုံးမျိုးစလုံးမှာ သုံးနိုင်တာဆိုလို့ လှေသာသာပဲ့ကျိပ်လေးတွေပဲရှိတယ်။ ဒါလေးတွေနဲ့ပဲ ခရမ်းမြို့တက်လည်းဖွတ်ချက်။ ဖွတ်ချက်။ ရန်ကုန်ဘက်သွားလည်း ဖွတ်ချက်၊ ဖွက်ချက်ပေါ့။
တစ်ချိန်တုန်းကတော့ ဒီရွာလေးမှာ အလယ်တန်းဆင့်အထိ သင်လို့ရတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းတော့ရှိ ဖူးတယ်။ ဒီရွာကျောင်းကနေ ခုနှစ်တန်းအောင်ပြီး မူလတန်းပြ ဆရာတွေဖြစ်သွားကြတာတောင် ဒုနဲ့ဒေး။
သူ့တုန်းကလည်း ခုနစ်တန်းကို ဒီရွာကလေးကပဲ အောင်ခဲ့တာ။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကနေ့အထိ သူ့လောက်တော်ခဲ့၊ ထက်ခဲ့တဲ့သူ ဒီရွာမှာမရှိသေးဘူး။ ဒီရွာရဲ့ နောက်ပေါက် မျိုးဆက်သစ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ တော်တော်၊ ဘာတံဆိပ်တွေပဲရရ၊ သူရဲ့နာမည်ဘေးဝိုက်ကွင်းထဲက တံဆိပ်တွေ၊ ဂုဏ်ထူးတွေကိုတော့ မီနိုင်ကြတဲ့ သူမရှိသေးဘူး။ သူက တကယ်လည်းတော်ခဲ့တယ်။ သမိုင်းမှာတောင် နာမည်တစ်ခုမော်ကွန်းတင်ခံရတဲ့အထိပေါ့။
သူခုနှစ်တန်းအောင်တော့ ရန်ကုန်ကိုရောက်တယ်။ ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းဆက်တက်ရင်း ၉ တန်းအရောက် မှာ သူ့ရဲ့နာမည်ကို မော်ကွန်းတင်ခံရမယ့် ဌာနတစ်ခုမှာ သူအလုပ်ဝင်ခဲ့တာ သက်ပြည့်ပင်စင်ရတဲ့ အခုအချိန်ထိ ပါပဲ။ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက် နေရာတိုင်းမှာ သူကတော်တော့ သူရခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်တွေက နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ တံဆိပ်တွေမှအနီတွေ၊ အစိမ်းတွေ၊ အပြာတွေ အရောင်ကိုစုံနေတာ။
ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်တွေ အရောင်စုံနေသလိုပဲ သူ့ဘ၀ကလည်း အရောင်ကခပ်စုံစုံရယ်။ သူရခဲ့တဲ့ မိန်းမတွေကိုပဲကြည့်။ စုစုပေါင်းသုံးယောက်။ ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ ရည်းစားဦးမဟုတ်ရှာဘူး။ သူ့ရဲ့အလုပ် တာဝန်နဲ့ မိတ္ထီလာဘက်အသွား။ သူ့ရဲ့အထက်အရာရှိက သဘောတူတာနဲ့ ပထမဆုံး မိန်းမတစ်ယောက်ကို ဆိုင်းမဆင့်၊ ဗုံမပါပဲရခဲ့တာ။ ဒီလိုဆိုငြင်းလိုက်ပါတော့လားလို့ မေးစရာရှိပေမယ့် သူကနေရာတိုင်းမှာ အလုပ်တာဝန် ကျေသလို၊ အထက်လူကြီးရဲ့အမိန့်ကိုလည်း ဘယ်တုန်းကမှ လွန်ဆန်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလေ။
ပြောရမယ်ဆိုရင် သူပထမဆုံးအိမ်ထောင်ကျတာကို ရွာကလေးက သူ့မိဘတွေတောင် သိလိုက်တာ မဟုတ်ဘူးရယ်။ သူတို့ခေတ်တုန်းက ဖုန်းအဆက်အသွယ်မရှိ၊ ဘာမရှိနဲ့ဆိုတော့ သူ့အကြောင်းကို ရွာကလူတွေ တစ်ဦးတစ်ယောက်လောက်တောင် သိလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။
ရွာမှာက သူ့ရဲ့ငယ်ချစ်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ တကယ်တော့ အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ရွာကို သူပြန်လာတာက သူအိမ်ထောင်ကျပြီဆိုတဲ့အကြောင်း အသိပေးရုံသက်သက်ပါ။ သူ့ရဲ့ဇနီးကတော့ပါမလာခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ရွာကို ရောက်တော့။
သူရည်လည်းမရည်ရွယ်ခဲ့သလို အစီအစဉ်လည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် 'အကြောင်းကံများကပေါင်းဖို့ ဖန်လာတယ်' ဆိုသလိုပဲ နောက်ဆုံးမှာ ရွာကငယ်ချစ်ဟာ သူ့ရဲ့ဒုတိယအိမ်ထောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ရွာကလေးကို အဲဒီတစ်ခေါက်လာပြီးကတည်းက လူဝတ်ကြောင်ကိုစွန့်ပြီးဘုန်းကြီးဝတ်နေတဲ့ သူ့အဖေပြန်လွန် တော်မူမှပဲ သူနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်တော့တာ။ သူတို့ခေတ်က အမြှောင်မယားတွေ၊ အပြိုင်မယားတွေများ လေတော့ အဲဒီအချိန်မှာ သူက တတိယအိမ်ထောင်ထောင်ကျပြီးနေပြီလေ။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ တတိယအိမ်ထောင် ကျတော့ ဒုတိယမိန်းမက မယားကြီးဖြစ်သွား။ တတိယမိန်းမဟာ အငယ်ပေါ့။ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးမိန်းမတော့ ကွာရှင်းပြီးပြီလေ။
ရွာကလေးကတော့ အမြဲတမ်း သူကိုအထူးအဆန်းပေါ့။ ရွာမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေ သူလုပ်သလိုရွာမှာ မရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေက သူ့မှာပဲ ပဒေသာပင်သီးသလို စုပြုံဖြစ်နေတာကိုး။ ရွာကလေးအနေနဲ့အားကျအကြည့်၊ ဂုဏ်ယူအကြည့်ပေါ့။ 'ဒါ . .ငါတို့ရွာသားကွ' ဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးပေါ့။ ရွာကလေးက သူ့ကိုတစ်ကယ်ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါ။ သူကလည်း ထူးဆန်းတယ်။ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးကလွဲလို့ တော်ရုံတန်ရုံဘုန်းကြီးကို လက်အုပ်မချီသလို လူကြီးသူမတွေနဲ့ တစ်ဝိုင်းတည်း စကားထိုင်ပြောရင်တောင် ဒူးချိတ်မပျက်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး။ သူအမြဲတမ်းပြောနေကျ စကားတစ်ခွန်း တော့ရှိတယ်။
'ဘာမှမလုပ်ရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ လူတိုင်းမှာလျှောက်စရာလမ်း တစ်လမ်းတော့ မလွဲမသွေရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်လျှောက်ရမယ့်လမ်းကိုသာ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီး လျှောက်ရမယ်။ အမေမွေးလာကတည်းက ဘယ်သူမှ ခြေထောက်တစ်ဖက်အပိုမပါဘူး'
သူပြောချင်တာက နောက်ပေါက်တွေသူ့လို ကြိုးစားကြဆိုတဲ့ပုံစံ။ ခက်တာက နောက်ပေါက်တွေကို လမ်းဖောက်ကြလို့သာ သူကခဏခဏပြောတာ။ သူဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကို နောက်ကလိုက်လျှောက်ကြဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးကျတော့ သူ့စကားထဲမှာရှိမနေပြန်ဘူး။ ပိုက်ချက်မပြရုံတင်မဟုတ်ဘူး။ သူကဟင်းစားပါမပေးတာ။
သူ့ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံးကို ခြုံကြည့်ရင် အတော်ကြီးကိုအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ဒြပ်တွေတောင်မကပါ ဘူး။ ငွေကြေးဥစ္စာဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့ဒုတိယမိန်းမနဲ့ တတိယမိန်းမက မွေးထားတဲ့ သားသမီးတစ်ကျိပ်ကိုပြည့်လျှံဖူလုံ လောက်အောင် စည်းစိမ်ကရှိခဲ့တာပါ။ တစ်ခုရှိတာက ရွာကလေးက သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားသလို သူကအတိုင်းအတာ တစ်ခုထက်ပိုပြီး ရွာကလေးကို စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ရွာကလေးမှာ လူတိုင်းနီးပါးရဲ့အမည်နာမတွေ ကမ္ပည်းပေါ်ရောက် နေပေမယ့် မိန်းမသုံးယောက်၊ သားသမီးတစ်ကျိပ်နဲ့ ဘယ်တော့မှလွတ်လပ်မှုရှိမနေတဲ့ သူ့ရဲ့နာမည်က ရွာကလေး ရဲ့တစ်ခုသော ကမ္ပည်းပေါ်ကိုရောက်မနေသေးဘူး။
အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ သူ့ဘ၀ဟာ သက်ပြည့်ပင်စင်ရပြီးတာတောင် ဌာနတစ်ခုရဲ့အတိုင်ပင်ခံ အဖြစ်နဲ့ အားရတယ်မရှိသေးဘူး။ 'ဘာမှမလုပ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး' ဆိုတဲ့ သူ့စကားအတိုင်းလုပ်လို့ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဟာ သူ့ရဲ့အာရုံတွေကို ရွာကလေးဆီ ဆွဲခေါ်သွားဖို့ မတက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ရွာကလေးရဲ့ ကမ္ပည်းလေးတွေကလည်း သူ့ရဲ့စိတ်ကိုမညှို့ငင်နိုင်သေးဘူး။ ရွာကလေးကတော့ သူ့ရဲ့နာမည်ရယ်၊ နာမည် နောက်ဝိုက်ကွင်းထဲက ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တံဆိပ်ပေါင်းများစွာတွေရယ်ပါမယ့် ကမ္ပည်းတိုင်လေးတစ်ခုကိုအပြင်း အထန်ရှာဖွေနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စအတွက် ရွာကလေးကတော့ ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့နွေတစ်နေ့မှာ ရွာကလေးကို သူမထင်မှတ်ပဲ ရောက်လာတယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ ရောက်လာတယ် ဆိုမှတော့ မြို့မှာအခြေကျနေတဲ့ အများသူငါလို ရွာကလေးကို မသေခင်နှုတ်ဆက်ဖို့၊ ရွာကလေးမှာ ခေါင်းချဖို့ ဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ ဘယ်လာရှိနေလိမ့်မတုန်း။ ရွာကလေးကိုအ၀င် ခပ်လှမ်းလှမ်းက ကုတို့တဲပုံစံအဆောက်အဦးလေးအရောက် သူ့ရဲ့သားက မောင်းလာတဲ့ ကားကိုရပ်တယ်။
'ဒါရေချမ်းစင်ပဲဖြစ်မယ်အဖေ။ ရေဗူးကုန်သွားတာကြာပြီဆိုတော့ ရွာထဲအထိ ကျွန်တော်မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်ရေဆင်းသောက်လိုက်ဦးမယ်'
သူ့ရဲ့သားကပြောပြီးကားတံခါးဖွင့်ဆင်းတော့ ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ သူ့မြေးနှစ်ယောက်ကလည်း မပြော မဆိုအောက်ကိုဆင်းသွားကြတယ်။
ရန်ကုန်နဲ့က ဘယ်လောက်မှဝေးတာမဟုတ်ပေမယ့် နေတပူပူ၊ ဖုန်တဆူဆူဖြစ်နေတဲ့ လှည်းလမ်းမတာ ရိုးကိုအပြင်းချီတက်လာရတာဆိုတော့ ကားပေါ်ကလူတွေ နေတံလျှပ်အောက်မှာ ခပ်ယိယိဖြစ်နေပြီ။ သူလည်း ခြေညောင်းလက်ဆန့်လုပ်ဖို့ ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သွပ်မိုး၊ အုတ်စီအဆောက်အဦးလေးထဲက ရေချမ်းစင်ရှိရာကို လှမ်းလိုက်တယ်။
'အနန္တငါးပါးဦးထိပ်ထား၍ လူပျိုကြီး ဦးကျင်စိန်နှင့် ဤရွာ၏ကွယ်လွန်သူအပေါင်းမှ သံသရာအတွက် ရည်ရွယ်၍ လှူဒါန်းသည်'
သူ့နှုတ်က ရုတ်တရက်အာမေဋိတ်ထွက်သွားတယ်။ ရေချမ်းစင် အဆောက်အဦးရဲ့ ကမ္ပည်းမှတ်တမ်းကို ဒုတိယအကြိမ် သူပြန်ဖတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ခုကို မကျေမနပ်ဖြစ်သွားတယ်။
'ဦးကျင်စိန်ဆိုတာ သုဘရာဇာကြီးမဟုတ်လား အဖေ'
သူ့သားရဲ့ အမေးကိုလည်း 'အင်း' လို့ တိုတိုတောင်းတောင်း သူဖြေလိုက်တယ်။ ကျင်စိန်။ သူကောင်း ကောင်းသိတာပေါ့။ ရွာကိုအရောက်အပေါက်နည်းလို့ ရွာကလူမှန်သမျှရဲ့အကြောင်း ခရေစေ့တွင်းကျသူမသိပေမယ့် ကျင်စိန်အကြောင်းကိုတော့ သူကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်။ သူသိတာမှ အော့နှလုံးနာစရာကောင်းလောက်အောင် ကျင်စိန်ရဲ့အကြောင်းက သူ့အာရုံမှာ မှတ်မိနေတာ။
'ဟေ့ . .ဒီရွာမှာ မမြိုင်နဲ့စပြီး ကျင်စိန်နဲ့ဆုံးတဲ့ သူချည်းပဲ။ အထီးအစ်မ လိင်အမျိုးအစားသာကွာရင်ကွာမယ်။ ဒီသီအိုရီကတော့ မပြောင်းဘူး အေ့'
ဦးကျင်စိန်တို့မူးလာပြီဆိုရင် ရွာရိုးကိုးပေါက်ကွေ့ကောက်ကောက်လမ်းလေးမှာ တအေ့အေ့နဲ့လေတက်၊ တကျွိကျွိနဲ့သွားတွေကျိတ်လို့ ပြောနေကျအထက်ပါစကားကိုပြောတော့တာပဲ။ ကိုကျင်စိန်ပြောတဲ့ မမြိုင်ဆိုတာက ဆေးရုံမရှိ၊ ဆေးခန်းမရှိတဲ့ ရွာကလေးရဲ့ အားထားရာအရပ်လက်သည်လေ။
ဦးကျင်စိန်က တစ်ကိုယ်တည်း လူပျိုကြီး။ အရက်သောက်တတ်တာကလွဲလို့ ရမ်းရမ်းကားကား ဘယ်တုန်း မှမရှိဘူး။ ပိုင်ဆိုင်သမျှ မယ်မယ်ရရလည်း မရှိသလို၊ အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်သမျှကို လက်ညှိုးထိုးပြစရာတောင် ဘယ်ဘက် လက်တစ်ဘက်ကမရှိဘူး။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာစ အလံအဖြူနီ ကွန်မြူနစ်တွေကြီးစိုး ကတည်းက တုတ်ပြီး ဓားပြီးအတွက် တုတ်သိုင်း၊ ဓားသိုင်းတွေလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အဆုံး ဦးကျင်စိန်ရဲ့ ဘယ်ဘက်လက်တစ်ဘက်ဟာ အစမ်းသပ်ခံအဖြစ် စတေးခံလိုက်ရတာ။ သိုင်းအခေါ်အရတော့ အရက်သောက်မိလို့ စည်းပေါက်တယ်ပေါ့။ အစပိုင်း လက်ရဲ့ဘယ်အပိုင်းကိုပဲခုတ်ခုတ် ရာဘာတုံးကို ခုတ်သလို 'ထင်' ကနဲပြန်ခုန်တက်လာတဲ့ ဓားဟာ တစ်နေ့မှာတော့ လေ့ကျင့်နေကျအတိုင်း လက်ကောက်ဝတ်ကို 'ရွှက်' ကနဲအခုတ်၊ ဓားသွားက လေပေါ်ကို ထင်ကနဲပြန်တက်မလာပဲနဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ထဲကို 'ဇွက်' ကနဲစိုက်ဝင်သွားတာ တိတိရိရိလေ။
အစပိုင်းကတော့ လက်ကောက်ဝတ်ကစပြီး ပြတ်သွားတာ။ ဒါပေမယ့် ဆေးထည့်ရင်း ပိုးဝင်လို့ တတိတိ ဖြတ်ပစ်လိုက်ရတာ နောက်ဆုံးလက်မောင်းရင်း ငုံးတိုအဆင့်ရောက်ရောဆိုပါတော့။ ဒီတော့ ဦးကျင်စိန်က အင်္ကျီဝတ်လို့မရတော့ဘူး။ သူ့ရဲ့ငုံးတိုလက်ကလေးကို ပုဆိုးတစ်ထည်နဲ့ပတ်လို့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်း တစ်ခုလုံးကို ဖုံးအုပ်ထားရတာ။ ဦးကျင်စိန်မှာ လက်တစ်ဘက်သာမရှိတာ။ သာမာန်လူတွေလုပ်တဲ့ ကိစ္စတော်တော်များများကို လုပ်နိုင်တယ်။ ထမင်းအိုးတည်လို့ ထမင်းရည်ငှဲ့မလား။ ညာလက်က ထမင်းအိုးနှုတ်ခမ်းကိုကိုင် ဘယ်ခြေမမှာ လက်နှီးခုညှပ်လို့ ထမင်းရည်ငှဲ့လိုက်တာများအဖြောင့်။ လောက်လေးခွပစ်ဦးမလား။ လောက်စာလုံးညှပ်ထားတဲ့ လောက်စာအိမ်ပါးစပ်မှာကိုက်လို့ ညာလက်နဲ့လွှဲပြီးပစ်ထည့်လိုက်တာများ ပစ်ကွင်းကိုကွက်တိ။
တချို့က သူ့ကိုနာမည်ပေးကြတယ်။ ဒေးဗစ်ချန်းကျင်စိန်တဲ့။ တစ်ချိန်က တရုတ်ပြည်မှာ လက်တစ်ဖက် ပြတ်ပုံစံ သရုပ်ဆောင်သွားတဲ့ တရုတ်မင်းသားကို အစွဲပြုလို့ပေါ့။ အဲဒီလက်တစ်ဘက်မရှိတဲ့ ဒေးဗစ်ချန်းကျင်စိန် က ဒီရွာမှာ သုဘရာဇာလုပ်လာတာများ နှစ်ပေါင်းရေတောင်မရေနိုင်တော့။ လက်တစ်ဘက်နဲ့ လူသေကိုကိုင်လိုက် တာများလျင်မှလျင်။
ဦးကျင်စိန်စွဲနေအောင်လုပ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်။ သူ့ရဲ့အမှတ်အသားပဲပြောရမှာ။ အဲဒါကရွာထဲက လူတစ်ယောက်သေလို့ လူသေကို မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုဟ်တဲ့ကိစ္စ သူလုပ်ပြီးသွားရင် အသုဘရှင်ထဲက အရက်ဖိုးတောင်း တော့တာပဲ။ များများစားစားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သဒ္ဓါကြေးပေါ့။ တကယ်တော့ အသုဘရှင်တွေကလည်း ဦးကျင်စိန်တောင်းစရာတောင်မလိုပါဘူး။ ပေးကြတာပါပဲ။ ထုံးစံလိုဖြစ်နေကြပြီပဲဟာ။ ထူးဆန်းတာက လူတစ် ယောက်သေလို့ရတဲ့ အဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေကို သူအရက်သောက်ဖို့အတွက် ဘယ်တော့မှမသုံးဘူး။ တစ်လန်လောက်ရှိ တဲ့အစစ်နှစ်ဖက်ပိတ် ၀ါးပိုးဝါးကြီးထဲကို ပိုက်ဆံတွေထည့်ထားတတ်တယ်။ ဒါက လူတစ်ကာသိတဲ့ကိစ္စပါ။ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေက 'ဦးကျင်စိန် မိန်းမယူဖို့ ဆုနေတာလား' လို့မေးရင် . . .
'ဒီငွေတွေက ၀ါးကျည်တောက်ထဲ အလွယ်တကူရောက်လာတဲ့ ငွေတွေမဟုတ်ဘူး။ လူတစ်ယောက်သေပြီးမှ ခဲခဲယဉ်းယဉ်းရောက်လာတာ။ ဒါလူသေတွေရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကွ၊ ငါ့ပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူး'
'ပိုက်ဆံတွေဆုလာတာကြာပြီ။ ဘယ်တော့ကျရင် ဘာလုပ်ဖို့လဲ' လို့များဆက်ပြီးမေးရင်။
'လူသေတွေအတွက် ကမ္ပည်းထိုးဖို့ကွ . . . ကမ္ပည်း ကမ္ပည်း။ ဒီရွာမှာ လူသေတွေအတွက် ကမ္ပည်းတစ်ခု လိုတယ်။ ဘယ်တော့လောက်လဲဆိုရင်တော့ ၀ါးကျည်တောက်ပြည့်မှလို့ ပြောရမှာ။ နောက်ထပ်သုံးယောက်လောက်သေပြီးရင် ငါ့ရဲ့ ၀ါးကျည်တောက်ပြည့်ပြီ'
ဒီလိုပြန်ပြောတတ်တာ။ မေးတဲ့လူတောင်ဦးကျင်စိန်ရဲ့ အလှူလေး အမြန်ဖြစ်မြောက်ဖို့ ၀ါးကျည်တောက် လေးအမြန်ပြည့်ဖို့သေပေးရဦးမယ့်ပုံ။ ဟုတ်တယ်လေ။ ဒေးဗစ်ချန်းဦးကျင်စိန်က မသာအတွက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံကလွဲလို့ ဘယ်က ပိုက်ဆံမှ ၀ါးကျည်တောက်ထဲ ထည့်တာမဟုတ်တဲ့ဟာကို။
သုဘရာဇာကြီးဒေးဗစ်ချန်းဦးကျင်စိန်ရဲ့ အလှူကမ္ပည်းကို သူနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီး ဖတ်လိုက်တယ်။ ဦးကျင်စိန်အကြောင်းက သူအားလုံးသိထားတာကိုး။ သိရုံတင်ထောင် ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ။ သူနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ် ရွာကိုလာတုန်းက ရွာလည်လမ်းမမှာ အရက်မူးလာတဲ့ ဦးကျင်စိန်နဲ့ ပတ်ပင်းတွေ့တော့။
'ဟာ . .ကိုပန်းညွန့်ကြီး၊ မတွေ့တာတောင်နှစ်များစွာပဲ။ သွားတွေကျိုး ဆံပင်တွေဖြူပြီး အတော်ကြီးကို အိုစာသွားတာပဲ။ ဘာလဲ . .ခင်ဗျား အသက်ကြီးလို့ ရွာမှာလာသေတာလား။ လုပ်လိုက်ဗျာအမြန်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ ၀ါးကျည်တောက်စုဘူးကြီးလည်း မပြည့်သေးလို့'
သူတစ်သက်လုံး ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့ နာမည်ကို လုံးဝမဟဘဲ ငယ်နာမည်ကိုတွင်တွင်သုံးလို့ ဦးကျင်စိန်က ပြောတော့ သူဖြင့်ဆတ်ဆတ်ခါပါပဲ။ ဒီကောင်ဒီလောက်မိုက်ရိုင်းရသလားပေါ့။ တံဆိပ်ပေါင်းများစွာနဲ့ ငါ့လိုလူကို ဒီလိုစကားပြောရဲသလားပေါ့။ ဘေးကတူတော်မောင်တွေပါလာတာတောင် သူလက်သီးအကြိမ်ကြိမ်ဆုပ်မိတဲ့အထိ။
အခုအဲ့ဒီကျင်စိန်က အလှူကမ္ပည်းကြီးကိုဟည်းလို့ဆိုတာမျိုးလုပ်ထားတော့ သူအံ့သြတာလည်းမဟုတ် မင်တက်တာလည်းမဟုတ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ပည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ သူအတော်ခံစားသွားရတယ်။ ဒီရွာကလေးဟာ သူ့အမည်နာမနဲ့ပတ်သက်လို့ ကမ္ပည်းလေးတစ်ခုရှိစေချင်ပုံရတာလည်း သူမသိတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူဘယ်တုန်းကမှ အေးဆေးခဲ့ဖူးတာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဖင်ပူအောင်ထိုင်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကိစ္စတစ်ခုကို မဖြစ် မနေလုပ်ဆောင်ရလိမ့်မယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီအတွေးက ဒီရွာကလေးကိုရောက်မှ ဒုန်းစိုင်းရခဲ့တာပါ။ ပိုပြီးသေချာ တာက ရွာကလေးကို မ၀င်ခင် ကိုကျင်စိန်ရဲ့ကမ္ပည်းလေးကိုမြင်ပြီးမှလို့ ပြောရမှာ။
ရွာကလေးရဲ့မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပွဲမှာ ရွာကလေးဟာ မစည်ကားစဖူးစည်ကား နေတယ်။ ဟိုဘက်ရွာက ဒိုးပတ်ဝိုင်းတွေငှားလို့ ဦးရွှေရိုး၊ ဒေါ်မိုးအကတွေနဲ့တကယ့်ကို မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်။ ဖဲကြိုးဖြတ်ပြီး ဖွင့်လှစ်မယ့်ပွဲမို့ မိုးပျံပူပေါင်းတွေအစုလိုက် အပြုံလိုက်ကိုရောထွေးချည်နှောင်ထားတဲ့ ဖဲကြိုးကိုင် ကြမယ့်သူ၊ ကတ်ကြေးဗန်းကိုင်ကြမယ့်သူတွေဖြစ်တဲ့ ရွာရဲ့အချောဆုံး၊ အလှဆုံးသူဇာတို့၊ စာဥတို့မိကေတို့တောင် မိတ်ကပ်အဖွေးသားနဲ့ ဟိုနားဒီနားပဲများနေကြလို့။
ရွာကလေးက အလှူရှင်ကို စိတ်ဝင်စားသလို အလှူရှင်နာမည်ပါမယ့်ကမ္ပည်းကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတယ်။ 'ဒီကမ္ပည်းရဲ့ အလှူရှင်ဟာ ငါတို့ရွာသား' ဆိုတဲ့ ပီတိပြုံးတွေကိုလည်း ရွာသားတိုင်းလိုလိုရဲ့ မျက်ဝန်းမှာတွေ့နေ ရတယ်။ ရီမုကွန်ထရိုးတွေဘာတွေမပါတော့ အလှူရှင်ရဲ့ကမ္ပည်းကိုတော့ လောလောဆယ် ပိတ်ဖြူလေးနဲ့ အုပ်လို့ပေါ့။ ကမ္ပည်းမှတ်တမ်းမှာတော့ ကွင်းစ၊ ကွင်းပိတ်ပေါင်းများစွာ ကပ်ပါနေတဲ့ နာမည်တစ်ခုနဲ့ သူ့ရဲ့မိသား တစ်စုရဲ့နာမည်တွေကရောထွေးပြွတ်သိပ်လို့။
လူတွေစုစုရုံးရုံးဖြစ်နေကြပေမယ့် အခမ်းအနားစတင်ရမယ့်အချိန်ကိုတော့ မကြေငြာရသေးဘူး။ အခမ်း အနားမှာကမကထလုပ်တဲ့ အလှူရှင်နဲ့အမျိုးတော်စပ်သူတွေတောင် 'ဟယ်လို' 'ဟယ်လို' နဲ့မိုက်ကိုအကြိမ်ကြိမ် စမ်းပြီးဖြစ်နေပေမယ့် အခမ်းအနားစရမယ့်အချိန်ကို အတိအကျသိမနေသေးဘူး။ သူတို့မျှော်နေကြတာက ရန်ကုန် ကနေ ဒီနေ့မနက်ရောက်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ အလှူရှင်မိသားစုရဲ့ကားလေ။
ဟိုမှာဘက်က စားပွဲခုံတွေပေါ်တင်ပြီး ဖွင့်ထားတဲ့ စောင်းဘောက်ရဲ့အသံမှာတော့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့၊ ဂျင်းနီ တို့ရဲ့ 'ကြာပါတယ်ကွာ။ မြန်မြန်လာသိပ်စိတ်ညစ်တယ်။ ကြာပါတယ်ကွာ။ တော်တော်ကြာမုန်းမိလိမ့်မယ်' ဆိုတဲ့သီချင်းကတော့ မဖွင့်တာကြာတဲ့ စောင်းဘောက်အိုကြီးအစွမ်းကြောင့် ပအဲ့၊ ပအဲ့နဲ့ခပ်ယဲ့ယဲ့ပေါ့။ ဒီကျောင်း လေးရဲ့ မူလတန်းကျောင်းသားလေးတွေကလည်း သူတို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ ရန်ကုန်က အလှူရှင်မိသားစုဆိုတာကို အထူးအဆန်းမို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ကားလာမယ်ဆိုတဲ့ ကျက်ထားရတဲ့ စာသားတွေမေ့သွားမှာစိုးလို့ ပါးစပ် ကလေးတွေက ပွစိ၊ ပွစိ။
ဒီလိုနဲ့ မနက်ရှစ်နာရီလောက် အရောက်လာမယ့် အလှူရှင်မိသားစုရဲ့ကားဟာ ကိုးနာရီတိတိရှိတဲ့ အချိန် ထိ တစ်စွန်းတစ်စတောင် အရိပ်အယောင်မပြသေးတော့ စောင့်နေကြတဲ့ လူအုပ်စုတောင့်တောင့်ကြီးဟာ ရွစိ၊ ရွစိဖြစ်စပြုလာပြီ။ ဒီအခမ်းအနားကို ဦးဆောင်တဲ့ အလှူရှင်ရဲ့ အမျိုးတွေတောင် ကိုးနာရီခွဲလို့မှ အလှူရှင်ကား မလာရင် တစ်နည်းတစ်ဖုံနဲ့ ဒီအခမ်းအနားကိုဖွင့်ဖို့ စဉ်းစားရပြီ။ ရွာကလေးရဲ့နွေမနက် ကိုးနာရီအပူရှိန်ဟာ လူအုပ်ကြီးကိုချွေးပြန်စေပြီလေ။ ဖဲကြိုးကိုင်ပေးဖို့ မိတ်ကပ်လှလှလေးတွေဖို့ထားကြတဲ့ စာဥတို့မျက်နှာမှာတော့ နေတံလျှပ်ကြောင့် မိတ်ကပ်နဲ့ချွေးနှစ်ပါးပြိုင်လို့ ဗွက်ပေါက်နေပြီပေါ့။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ မထင်မှတ်ဘဲ ကိစ္စတစ်ခုဟာ ၀ုန်းဒိုင်းဖြစ်လာခဲ့တာ။ ဘယ်သူရှိရမတုန်း။ ဒေးဗစ်ချင်းကျင်စိန် ပေါ့။ သူဇာကိုင်ထားတဲ့ ဗန်းထဲက ကတ်ကြေးကို ဖျတ်ကနဲဆွဲယူလို့ မိုးပျံပူပေါင်းတွေစုချည်ထားတဲ့ ကြိုးကို တိကနဲ ဖြတ်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပါးစပ်ကလည်း ပြောလိုက်သေးတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ လူအုပ်ကြီးဟာ ကြောင်စီစီနဲ့မို့ လက်ခုပ်တီးရမယ်မှန်းမသိလိုက်ကြပေမယ့် အခမ်းအနား ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေငြာရင် လက်ခုပ်တီးရမယ်လို့ သင်ကြားထားခြင်းခံရတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေဟာ မတိုင်ပင်ပဲ လက်ခုပ်တီးလိုက်ကြတယ်။
'အလှူရှင်ကိုစောင့်နေကြတာဆိုရင်တော့ စောင့်မနေကြနဲ့တော့။ နေပူထဲမှာ ၀ဋ်ဒုက္ခကြီးတယ်။ အလှူရှင်က သေတောင်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလူက မမြိုင်နဲ့စခဲ့တာမဟုတ်သလို၊ ကျင်စိန်နဲ့ဆုံးချင်တဲ့ သူလည်းမဟုတ်ဘူး'
ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ လက်ခုပ်သံတဖြောင်းဖြောင်းကြားမှာ ဦးကျင်စိန်က ပြောချင်ရာတွေပြောပြီး သူ့ရဲ့လက်ငုတ်တိုတစ်ဘက် ပတ်ထားတဲ့ ပုဆိုးကိုပြန်ပြင်လို့ လူအုပ်တောင့်တောင့်ထဲက ထွက်သွားတယ်။ မိုးပျံပူပေါင်းလေးတွေလည်း ကောင်းကင်မှာ တစ်လုံးစီတဖြည်းဖြည်းပြိုကွဲသွားပြီ။ ကမ္ပည်းဖွင့်ပွဲတစ်ခုလည်း အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပြီပဲ ဆိုရတော့မှာပေါ့။
လူအုပ်တောင့်တောင့်ကြီးကတော့ နေရာကမရွေ့ကြသေးဘူး။ သူတို့ရဲ့ မျက်ဝန်းအကြည့်တွေက ခပ်လှမ်း လှမ်းကိုရောက်သွားတဲ့ ဒေးဗစ်ချန်းဦးကျင်စိန်ရဲ့ကျောပြင်ပြောင်ပြောင်ပေါ်မှာ တချို့။ အလှူရှင်ရဲ့ ကားများလာ လေဦးမလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ တာရိုးဘက်က ဖုန်လုံးလုံးတွေဆီမှာတစ်ချို့။
လူအုပ်တောင့်တောင့်ကြီးကတော့ အချိန်အတော်ကြီးကြာတဲ့အထိ၊ မတိုင်ပင်ပါပဲ နေပူကျဲကျဲကြီးအောက် မှာ မင်တက်စွာ ရပ်နေကြတုန်းပဲ။
မတ် ၂၀၁၀၊ ကလျာမဂ္ဂဇင်း